Farafahakeliny vehivavy mozambikana mpianatra polisy 15 no bevohokan’ny mpampianatra azy ireo, araka ny dosie ao anatiny · Global Voices teny Malagasy
Noroahana hody any aminy ireo ireo mpianatra vehivavy ireo
Voadika ny 02 Septambra 2020 3:59 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, русский, English, Swahili, Português
Sary mandravaka ny lanonam-pamaranana fanofanana polisy mozambikana. Ny valonan-damba ambany amin'ny efijery dia mampahatsiahy ny fidirana an-tsehatry ny filoha Filipe Nyusi, izay itakiany ny tamberin'andraikitr'ireo olona voarohirohy nahabevohoka mpianatra tao amin'ny sekoly fanofanana polisy ao Matalana. Pikantsarin'ny fantsona YouTube STV, notontosain'ny mpanoratra tamin'ny 19 aogositra.
Mankany amin'ny pejy miteny paortiogey ny rohy rehetra amin'ity lahatsoratra ity.
Nivoaka tao amin'ny gazetim-pirenena ny dosie notazonina ho tsiambaratelo avy amin'ny polisy mozambikana, milaza fa vehivavy mpianatra 15 ao amin'ny sekoly fanofanana polisy ao Matalana, faritanin'i Maputo, no bevohoka.
Tondroin'ny antontan-kevitra fa avy amin'ny fifandraisan'ny mpianatra sy ny mpampianatra azy, tsy voalaza na nifanekena na tsia, no nahatonga ireo vohoka ireo.
Etsy ankilan'izany, voalaza fa naaton'ny sekoly fanofanana polisy vonjimaika ireo mpianatra bevohoka ireo ary ny polisy no niantoka ny sarandalana iverenan'izy ireny any amin'ny faritany niaviany avy. Farany, mandroso koa ity antontan-kevitra ity fa “naato” ireo mpampianatra voarohirohy.
Tamin'ny famaliana ny fanontanian'ny gazety O País tamin'ity raharaha ity tamin'ny 8 aogositra, nanambara ny komandy-jeneralin'ny polisy, Bernardino Rafael, fa efa ao anatin'ny rakipaika fanasaziana ireo olona voarohirohy.
Tsy ela dia nisongadina tao amin'ny tambajotra sosialy ny fanehoan-kevitra tsy mankasitraka momba ity raharaha ity. Maro ireo mpiserasera no naneho ampahibemaso ny fahasosorany manoloana ny fanapahan-kevitry ny sekoly, ary nitaky rariny ho an'ireo vehivavy.
Naneho hevitra tao amin'ny pejiny Facebook ny mpikatroka Fátima Mimbire :
Karakarao matotra araka ny tokony ho izy ity raharaha [sekoly fanonanana polisy ao] Matalana ity. Mahavaky ny foko ny mandre fa vehivavy mpianatra miisa 15 ao amin'ny seskoly fanofanana polisy ao Matalana no bevohoka. Henjana izany. Henjana satria, araka izay nosoritan'ny antonta-kevitra ihany, mpampianatra vitsivitsy no voarohirohy.
Izany hoe raha misy olona manana fahefana manoloana ny iray hafa nahatonga vohoka, dia amin'ny farany asiana “rakipaika kely”? Mampahatsiahy ahy mpampianatra iray mitady firaisana ara-nofo amin'ny mpianany raha te-hahazo naoty tsara na ialana amin'ny fanalam-baraka noho ny “fahadalany”, araka ny fijein'ilay mpampianatra ambony, ity toe-javatra ity. Rahatokony entina eny amin'ny fitsarana dia afindra toeram-pampianarana hafa fotsiny. Dia mitohy any indray ny talentany.
Nanameloka ity raharaha ity tao amin'ny Twitter ihany koa ny Txeka, vondrona vehivavy mpikatroka :
Manangana fiarahamonina anjakan'ny rariny, ao anatin'ny fitovian'ny zon'olompirenena, mandalo amin'ny alalan'ny politikan'ny fanabeazana sy fampiofanana voalanjalanja izany, izay manome lanja ny famolavolana ny olompirenena, miaraka amin'ny fikarakarana siantifika sy fanabeazana mahaolompirenena tia tanindrazana vanona.
[sary] mpikatroky ny Txeka maka sary amin'ny endrika hentitra, mitazona afisy mivaky hoe : “Fifandraisana tsy mitovy tantana fa anjakan'ny fahefana ny fifandraisan'ny mpampianatra sy ny mpianatra ! #affairematalane”
Fanao mahazatra amin'ny fiarahamonina anjakazakan-dehilahy, izay fantatra amin'ny fanazimbana ny vehivavy sy ny fankatoavana ny sitrapon'ny lehilahy ny fiampangana ny lasibatry ny herisetra ara-nofo, ka mahatonga fitsarana ny fihetsiky ny lasibatra, sy fampihenana ny [andraikitry ny] mpanafika amin'ny fihetsiny.
[images] Ankavia, mpikatroky ny vondrona Txeka mitazona afisy sora-tanana manao hoe : “Tsy saziana mihitsy ny mpampianatra manoloana ny vehivavy ampianariny.” ; “MItohy ny fiarovana ny mpanafika sy ny fanamelohana ny lasibatra !”. Ankavanana, lohateny lehibe amin'ny gazety : “Kamo ry zavavy dia tadiaviny omena devoara mora ry zareo.” (tenin'ny filohan'ny fikambanan'ny manamboninahitra polisy)
Manoratra ao amin'ny Facebook ny profesora Carlos Serra :
Matalane ? Tendro kely hita amin'ny goavana be miafina ao ambaniny io, novolavolaina hamokatra hatrany [izay nitranga tao] Matalane isika. Alaiko sary an-tsaina ny andro hitantaran-dry zavavy ny tantarany, manomboka hatrany amin'ny fahazazany.
NItovy fihetseham-po amin'io ny mpanoratra an-gazety sady mpikatroka Selma Inocência :
Profesora vitsy no tratran'ny fanenjehana, vitsy no tsaraina sy melohina. Noho ry zareo, very ny fahazazan'ny zazavavy an'arivony. Toerana tsy azo antoka ny sekoly.
Maneho ny antontanisa fa zazavavy an-jatony no bevohoka any an-tsekoly, ka noho ny mpampianatra, profesora, tale no anton'izany amin'ny ampahany.
[sary] Afism-panentanana #laoranjionytontolo an'ny Firenena Mikambana mampiroborobo ny teny faneva hoe : “Mihetsika aho hampitsaharana ny herisetra ampiharina amin'ny vehivavy sy ny zazavavy.”
Nisy ihany koa fanangonan-tsonia navoaka hitakiana fanazavana avy amin'ireo polisy voarohirohy amin'ny fihetsiny. Hatramin'ny fotoana nanoratana ny teny paortiogey, olona mihoatra ny 3 800 no nanasonia izany.
Tamin'ny 19 aogositra, nivoaka tamin'ny fahanginany ihany ny filoha mozambikanina Filipe Nyusi nanambara ny fisokafan'ny famotoran'ny polisy amni'ity raharaha ity :
Mandray hentitra ity raharaha ity ny governemanta ka efa an-dalana ny famotopotorana lalina eo anivon'ny minisitera sy ny etamazaoro jereralin'ny polisin'ny Repoblikan'i Mozambika. Tsy mahazo mandefitra amin'ny toe-javatra toa izao ny fanjakana, ary tsy handefitra. Ho ampiharina ny lalàna ary mitovy izany ho an'ny rehetra. Tsy misy olona ambony lalàna.
Manao ny famotorana izahay amin'izao fotoana izao natao hamaritana ny toe-javatra manodidina ny tranga tsirairay avy, sady manaja ny fahavoazana ara-tsaina sy ara-pihetsehampo mianjady amin'ny vehivavy bevohoka, izay mendrika hohajaina amin'ny mahaolona azy.
Raharaha hafa malaza an-gazety
Manampy totraka amin'ny herisetra miankady amin'ny vehivavy mozambikana ity raharaha ity, izay matetika tsy hita amin'ny fampitam-baovao.
Ao amin'ny faritanin'i Gaza, misy famotorana ady heloka bevava anenjehana ny depiote Alberto Niquice, avy amin'ny Mandam-Panafahana an'i Mozambika (Frelimo) mandeha amin'izao fotoana izao, amin'ny fanolanana zazavavy iray 13 taona tamin'ny taona 2018.
Tany am-piandohan'ny taona, fikambanana firaisamonim-pirenena mozambikana miisa 30 no mitaky ny hampiatoana ny depiote izay lany indray tamin'ny taona 2019. Mbola afa-niasa sy mampiasa ara-dalàna ny fehim-potoana iasany ao amin'ny Antenimieram-pirenena ihany anefa izy io.
Notantarain'ny gazety ihany koa ny raharaha herisetra an-tokatrano mahalasibatra an'i Josina Machel, zanakavavin'ny filohan'i Mozambika voalohany, Samora Machel.
Tamin'ny oktobra 2015, nodarohan'i Rofino Licuco, olona niaraka taminy nandritra ny telo taona i Josina Machel. Very tamin'izany ny masony ilany. Voaheloka higadra telo taona sy efa-bolana i Rofino Licuco, sady mandoa onitra 300 tapitrisa meticals (tokotokony ho 4,2 tapitrisa dolara amerikana) amin'i Josina Machel.
Nampakatra ny raharaha izy, ary tamin'ny jona 2020, nandrava io didy io ny fitsarana tampony noho ny «tsy fahampian'ny porofo».